[OFFICIAL] Buyisa Idatha evela iOS Icebo - Indlela-to Guide
Fumana Ukuqalisa, ukufumana izinto ezibalulekile
dr.fone toolkit - iOS wobuyiselo Data: Indlela To
Part 1. Buyisa Data ukusuka iOS Icebo ngqo
Icandelo 2. Buyisa Idatha evela iTunes Eyogcino
Inxalenye 3. Phinda Idatha evela iCloud Eyogcino
Inyathelo 1. Connect iOS Icebo ne Computer
Ivule dr.fone Ikhithi kwi khompyutha yakho. Sebenzisa intambo USB oluza isixhobo sakho iOS ukudibanisa iPhone, iPad okanye iPod wakho kwebala, kwi khompyutha yakho. Nqakraza ku "Indawo yoBuyiselo-nkcukacha" uze ukhethe "Buyisa ku iOS Icebo" ukhetho.
Amacebiso: Ngaphambi dr.fone esebenzayo, kodwa ubumele ukuba ukukhuphela uguqulelo lwe iTunes entsha. Ukuze uphephe ngokuzenzekelayo sync, musa ukuqalisa iTunes xa ibaleka dr.fone ikhithi. Mna ndicebisa ukuba ukhubaze i ukuvumelanisa automatical ku iTunes ngaphambi: uqalise iTunes> Ezikhethwayo> Devices, khangela 'Thintela neeiPod, iPhones, kunye iPads kwi Syncing ngokuzenzekela ".
Inyathelo 2. Skena Isixhobo yakho Lost Data phezu It
Nqakraza kwiqhosha "Qala Scan 'ukuba le nkqubo scan iPhone, iPad okanye iPod wakho touch ukuskena data esusiwe okanye ezilahlekileyo. Ukuskena g Inkqubo ungatsala imizuzu embalwa, kuxhomekeke kubungakanani idatha kwidivaysi yakho. Ngexesha lenkqubo ukuskena, xa ubona ukuba idatha ukhangela kukho, ngoko unga nqakraza i "yokuma" ukumisa inkqubo.
Inyathelo 3. Hlola ovavanyiweyo Data
Scan kuzakuthatha ixesha elithile. Xa oko kugqityiwe oko, ungabona result scan eyenziwe program. bobabini Data ilahlekile ekhoyo kwifowuni yakho ziboniswa ngokweendidi. Ukuze coca ulwelo ngaphandle i data esusiwe kwisixhobo sakho iOS, ungenza baswayipha ukhetho "ukubonisa Kuphela izinto esusiwe" ku ON. Ngokunqakraza uhlobo lwefayile kwi kwicala lasekhohlo, unakho ukuwufunda kuqala i data wafunyanwa. Kwaye ungabona kukho ibhokisi yokukhangela kwi ekunene phezulu ye window. Unakho ukukhangela ifayile ezithile utayipha igama kwibhokisi yokukhangela.
Inyathelo 4. Buyisa Idatha evela iPhone / iPad / iPod wakho touch
Xa ufumana idata oyifunayo, ubeke uphawu check nje phambi kwale bhokisi ukukhetha kuzo. Emva koko, klikha iqhosha "Buyisa" kwi ekunene emazantsi window. Ngokungagqibekanga, i-data wachacha izakugcinwa kwikhompyutha yakho. Njengoko kuba imiyalezo, imessage, abafowunelwa, okanye amanqaku, xa unqakraza Buyisa, a pop-up iza kubuza ukuba "Buyisa Computer" okanye "Buyisa Icebo". Ukuba ufuna ukubeka ezi imiyalezo kwisixhobo yakho iOS, nqakraza "Buyisa Icebo".
Inyathelo 1. Khetha Mode
Launch dr.fone uze ukhethe "Buyisa ku iTunes Yogcino Wefayile" kwi "Indawo yoBuyiselo-nkcukacha" isixhobo. Emva koko, i-iTunes isixhobo backup wokuchacha uya ukubona zonke iTunes iifayile backup kule khompyutha kwaye ukubonisa nabo window. Ungaqinisekisa nguwuphi na olu nye ufuna ke umhla sele ukudalile oko.
Inyathelo 2. Skena Data ukusuka iTunes Yogcino Ifayile
Khetha i iTunes ifayile elilalela equlathe idata ofuna ukubuyisa uze ucofe "Qala Scan". Kuya kuthatha imizuzu embalwa bekhupha yonke data evela iTunes ifayile elilalela. Linda.
Inyathelo 3. Hlola kwakhona Idatha evela iTunes Eyogcino
Emva kwemizuzwana embalwa, yonke idatha kwi ifayile elilalela uza kukhutshwa kwaye iboniswe ngokweendidi. Uyakwazi kuqala nganye nganye phambi kokuba achache. Ngoko ungenza uphawu emane aphilise abo ufuna ngokucofa i "Buyisa" iqhosha ngezantsi. Ngoku nabo, amanqaku imiyalezo kwaye inokubuyiselwa ngqo kwifowuni yakho iOS ukuba ugcine ifowuni yakho iOS edibene kwikhompyutha yakho nge USB ngexesha lenkqubo ekuphulukenwe nalo.
Amacebiso: ungabona kukho ibhokisi yokukhangela kwi result window. Ukusuka apho, unako uchwetheze igama lefayile ukufuna kuyo.
Emva kokwenza dr.fone izixhobo, khetha imo ekuphulukenwe nalo of "Buyisa ku iCloud Iifayile yeSistim" kwi "Indawo yoBuyiselo-nkcukacha" kwidashboard. Emva koko uya kubona i window ngezantsi. Faka akhawunti yakho iCloud kunye negama lokugqitha ukuze ungene ngemvume. dr.fone kuthatha nzulu zakho eziyimfihlo. We ze ugcine irekhodi yazo naziphi akhawunti info yakho Apple okanye umxholo nangaliphi na ixesha ngethuba leeseshoni zakho.
Inyathelo 2. Umxokozelo iCloud Yogcino Ifayile
Xa ungene iCloud, inkqubo Ungafumana zonke iifayile elilalela iCloud kwi-akhawunti yakho. Khetha enye apho uya khona ukubuyisa data kwaye nqakraza ku iqhosha i "New".
Kwaye ngoko pop-up, uyakwazi ukukhetha uhlobo lwefayile ongathanda ukulanda. Oku kuya kunciphisa ixesha yokulanda iCloud ifayile elilalela. Emva koko, ungenza scan umxholo iCloud ngoku. Nqakraza kwiqosha 'Imitha yovavanyo' ukuqala. Kuya kuthatha ixesha elide. ulinde nje okomzuzwana.
Inyathelo 3. Hlola kwaye Buyisa Data ukusuka iCloud Ifayile Eyogcino
Scan iya kuba ngokupheleleyo kwimizuzu embalwa. Xa ime, unakho ukuwufunda kuqala phantse yonke idatha yakho iCloud ifayile elilalela, ezifana abafowunelwa, imiyalezo, iifoto, kunye nangaphezulu. Khangela nganye nganye zize zitikishe umba ofuna. Emva koko nqakraza kwi "Buyisa Computer" okanye "Buyisa kwisixhobo yakho" qhosha ukugcina kwi computer yakho okanye isixhobo yakho ngokucofa kanye.
Ngoku abafowunelwa, imiyalezo kunye namanqaku inokubuyiselwa ngqo kwifowuni yakho iOS ukuba iPhone, iPad okanye iPod touch yakho iqhagamshelwe nge computer yakho ngentambo ye USB ngexesha lenkqubo ekuphulukenwe nalo.
Faka, Update, Khipha